Belata Nkebi CSS gị site na 20% ma ọ bụ karịa | Martech Zone
Monday, April 25, 2011 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Mbelata faịlụ ahụ adịghị mfe… mana, dị ka ọ dị na mbụ, enwere ngwaọrụ dị na ebe ahụ nwere ike ịrụrụ gị nnukwu ọrụ. M mere n'ofe CleanCSS, a mma ngwa maka formatting gị CSS na optimizing size nke CSS faịlụ. M gbara ọsọ na faịlụ CSS anyị site na ya ma belata nha faịlụ site na 16%. Emere m ya maka otu n'ime ndị ahịa m na ọ belata faịlụ CSS ha gbasara 30%.
Tags: CSScss gbuecss njikarịchaụdị mpempe akwụkwọsketị
ChaCha + iPhone: Mata, Geography, Azịza, ringkekọrịta